မြေ​လေးတစ်​​ပေ​လောက်​နဲ့ ရွာအပျက်​မခံကြနဲ့ သူ့အိမ်​ပါတယ်​ ငါ့အိမ်​ပါတယ်​နဲ့ ဆုတ်မပေးကြဘူး ​ဟော..အခု​တော့တစ်​ရွာလုံးသွားပြီဘုရား – Alinyaung
​မြေ​လေးတစ်​​ပေ​လောက်​နဲ့ ရွာအပျက်​မခံကြနဲ့ သူ့အိမ်​ပါတယ်​ ငါ့အိမ်​ပါတယ်​နဲ့ ဆုတ်မပေးကြဘူး ​ဟော..အခု​တော့တစ်​ရွာလုံးသွားပြီဘုရား
March 7, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM knowledge 0
အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုကြုံရတိုင်း ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစားအများကြီးရပာတယ်။ရွာတွေ၊ရပ်ကွက်တွေ ခေတ်နဲ့အညီပြောင်းလဲဖို့လိုပာပြီ။ (ရေစကြိုမြို့နယ် သစ်ကြီးတောရွာ မီးဘေးကြုံခဲ့ရပြီးနောက်။)
အသိဥာဏ်​မဲ့တဲ့…တ​ဇောက်​ကန်းလိုလူမျိုးပါရင်​…ရွာနာတယ်​……ဦးဇင်းရာ…တပည့်​​တော်​ရင်​နာလွန်းလို့ပါ..မနက်​​စော​စော.. ..ကြားလိုက်​ရတဲ့စကား…ကိုသာသန..ဘာဖြစ်​လို့လဲ ဘုရား…တပည့်​​တော်​တို့ရွာ ဖွံ့ဖြိုး​ရေးဆိုပြီးလူကြီး​တွေက..အရင်​နှစ်​က ကွင်းဆင်းလာလုပ်​​ပေးတယ်​ဘုရား….ရွာလမ်း​တွေချဲ့ ​ပေးပါ…ချဲ့ ​ပေးပါလို့ ​မေတ္တာရပ်​ခံပါတယ်​
သူ့အိမ်​ဘက်​ကျ ပါတယ်​…ငါ့အိမ်​ဘက်​ကျ ပါတယ်​နဲ့…တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ ​စောင်း​မြောင်းပြီး..လမ်းကိုချဲ့မ​ပေးကြဘူးဘုရား..အမှန်​က လမ်း​မြေ​တွေပါ…သူတို့က ဝန်းထရံကာရင်း…လမ်း​မြေကို ချဲ့  ချဲ့ ပြီး ယူထားတာသံသရာမ​ကြောက်​..ငရဲမ​ကြောက်​နဲ့ဘုရား..တပည့်​​တော်​တို့ ဖြူးမြို့ မှာ​နေ​တော့ အရှင်​ဘုရား လဲ ကြားဘူးတယ်​မဟုတ်​လား..ဒကာမကြီးတစ်​​ယောက်​​လေ…လမ်း​မြေယူထားတယ်​
ရုတ်​တရက်​သူကဆုံးသွား​တော့ ကျ န်​တဲ့ရွာသူတစ်​​ယောက်​ကိုမှီပြီး….လမ်း​မြေကိုပြန်​​ပေးကြပါ…ငါ့သားငါ့သမီး ​တွေ​ရေ..လမ်း​မြေကိုပြန်​​ပေးကြပါနဲ့ ​အော်​ပြီးထွက်​သွားတယ်​​လေ…သူ့သားသမီး​တွေက အမှူမဲ့အမှတ်​မဲ့​ပေါ့..ဆုတ်​မ​ပေးဘူး…ဒီအတိုင်းထားကြတယ်​..​နောက်​ ၂ ရက်​​လောက်​ရှိ​တော့ ထပ်​ပြီးမှီပါ​လေ​ရော…မင်းတို့ငါ့စကားနားမ​ထောင်​ဘူး…ငါ့စကားနားမ​ထောင်​ဘူး​ပေါ့…သူ့သားသမီး​တွေက. ဘာဖြစ်​​စေချ င်​လို့လဲအ​မေ ဖြစ်​ခြင်​တာကို​ပြောပါ…ဒီတစ်​ခါတကယ်​လုပ်​​ပေးပါမယ်​လို့ ဝန်​ခံကြ​တော့လမ်း​မြေကို တစ်​​ထောင်​​လောက်​ငါယူခဲ့တယ်​အခု..
အဲ့ဒီ ယူထားတဲ့…သဲမှူန့်​အ​ရေအတွက်​နဲ့အမျှ ငါ…ဒီ​မြေကြီးကို ​ခေါင်း​ပေါ်မှာရွက်​ထား​နေရတယ်​..စဉ်းစားကြည့်​ကြပါ….သဲမှုန့်​အမျှ တဲ့…လက်​တစ်​ဆုပ်​​တောင်​မှပဲ..သဲပွင့်​အ​ရေအတွက်​…ကု​ဋေကုဋာ ချီ ပြီးပါတာ…တစ်​​ပေ​လောက်​ဆို…သံသရာတစ်​​လျှောက်​လုံးခံ​ပေအုံး​တော့.. .​နောက်​ပွင့်​မယ့်​ အရိ​မေ​တ္တေ​ယျ မြတ်​စွာဘုရား​တောင်​မှ ဖူးခွင့်​မရ​တော့ဘူး..ဒီလိုခံရမယ့်​အ​ရေး​တွေကို မ​ကြောက်​ကြဘူးဘုရား…သူ့အိမ်​ပါတယ်​..ငါ့အိမ်​ပါတယ်​နဲ့ ဆုတ်​မ​ပေးကြဘူး…​ဟော..အခု​တော့တစ်​ရွာလုံးသွားပြီဘုရား..ဟာ..ဦးသာသန…ဘာဖြစ်​လို့လဲ ဘုရား…ဘာဖြစ်​ရမှာလဲ ဦးကဝိန်​​ရေ…ညက..တပည့်​​တော်​ တို့ရွာ​လေး…မီး​လောင်​တယ်​ဘုရား.. ….​လေကလဲ​နွေးဦး​ပေါက်​ဆို​​တော့တိုက်​တယ်​…ကိုယ်​​တော်​တို့ရွာက..မြို့ နဲ့နီးတာပဲ..မီးသတ်​ကား​တွေမ​ခေါ်ဘူးလား…ဘယ်​မ​ခေါ်ပဲ​နေပမလဲကိုယ်​​တော်​ရာ..​ခေါ်တာပ….မီးသတ်​ကားမှ လာလိုက်​တာ..တပည့်​​တော်​တို့မြို့ က မီးသတ်​ကားတင်​မဟုတ်​ဘူး..အနီးအနားကမြို့ ​တွေက မီးသတ်​ကားပါလာတာ…ဟ..ဒါဆို..​အေး​ဆေး​ပေါ့..မဟုတ်​ဘူးလား.ဟုတ်​ပ…ဟုတ်​ပ…​အေး​ဆေးချ က်​..တစ်​အိမ်​မှမကျန်​ဘူး…လွင်​တီး​ခေါင်းထိုင်​​နေရတယ်​…ဘာ​အေး​ဆေးသလားမ​မေးနဲ့..​ဟေ…မီးသတ်​ကားလဲမနိုင်​ဘူးလား…ဘာမနိုင်​ရမှာမှာလဲကိုယ်​​တော်​…ဆယ်​စီး​ကျော်​လာတယ်​…ဒါဆိုနိုင်​ရမှာပါ..ကိုယ်​​တော်​တို့ရွာက အိမ်​​ခြေ၃၀၀ ပဲရှိတာကို…ဦးကဝိန်​​ရေ.. .မီးသတ်​ကားဘယ်​နစီးလာလာရွာလမ်း​တွေကိုချဲ့ မ​ပေးကြ​တော့ တစ်​စီးမှဝင်​လို့မရဘူးဘရား…..အခုအကုန်​လုံးမီးထဲပါသွားပီ…​အေး​ရော..​အေး​ရောဘုရား…တဲ့..​ပြောလဲ​ပြော..ဖုန်းလဲချ သွား​လေရဲ့..ဒီကဘာမှ​တောင်​ပြန်​မ​ပြောလိုက်​ရဘူး…မှတ်​ထားကြ…မှတ်​ထားကြ​ဗျာ
အ​ရေးအ​ကြောင်း ဆို…မီးသတ်​ကားဝင်​မရတဲ့အထိမဖြစ်​​စေကြနဲ့…​မြေ​လေးတစ်​​ပေ​လောက်​နဲ့ ရွာအပျက်​မခံကြနဲ့လမ်း​တွေကို အ​ရေး​ပေါ်အ​ခြေ​နေမှာသုံးလို့ရ​အောင်​…အနည်းဆုံး. မီးသတ်​ကားဝင်​နိုင်​ထွက်​နိုင်​​အောင်​ ချဲ့ ​ပေးထားကြပါ ချဲ့ ​ပေး​အောင်​အသိဥာဏ်​​ပေးကြပါလို့…ရွားလုံးကျွတ်​မီးထဲပါသွားတဲ့ ..ဦးသာသနတို့ရွာလေးရဲ့အဖြစ်​ဆိုးကို..နမူနာယူကြပါလို့..တိုက်​တွန်းလိုက်​ရပါတယ်​​ဗျာ။
​မွေ​လေးတဈ​​ပေ​လောကျ​နဲ့ ရှာအပကျြ​မခံကွနဲ့ သူ့အိမျ​ပါတယျ​ ငါ့အိမျ​ပါတယျ​နဲ့ ဆုတျမပေးကွဘူး ​ဟော..အခု​တော့တဈ​ရှာလုံးသှားပွီဘုရား
အဖွဈဆိုးတဈခုကွုံရတိုငျး ယူတတျရငျ သငျခနျးစားအမြားကွီးရပာတယျ။ရှာတှေ၊ရပျကှကျတှေ ခတျေနဲ့အညီပွောငျးလဲဖို့လိုပာပွီ။ (ရစေကွိုမွို့နယျ သဈကွီးတောရှာ မီးဘေးကွုံခဲ့ရပွီးနောကျ။)
အသိဉာဏျ​မဲ့တဲ့…တ​ဇောကျ​ကနျးလိုလူမြိုးပါရငျ​…ရှာနာတယျ​……ဦးဇငျးရာ…တပညျ့​​တျော​ရငျ​နာလှနျးလို့ပါ..မနကျ​​စော​စော.. ..ကွားလိုကျ​ရတဲ့စကား…ကိုသာသန..ဘာဖွဈ​လို့လဲ ဘုရား…တပညျ့​​တျော​တို့ရှာ ဖှံ့ဖွိုး​ရေးဆိုပွီးလူကွီး​တှကေ..အရငျ​နှဈ​က ကှငျးဆငျးလာလုပျ​​ပေးတယျ​ဘုရား….ရှာလမျး​တှခြေဲ့ ​ပေးပါ…ခြဲ့ ​ပေးပါလို့ ​မတ်ေတာရပျ​ခံပါတယျ​
သူ့အိမျ​ဘကျ​ကြ ပါတယျ​…ငါ့အိမျ​ဘကျ​ကြ ပါတယျ​နဲ့…တဈ​​ယောကျ​နဲ့ တဈ​​ယောကျ​ ​စောငျး​မွောငျးပွီး..လမျးကိုခြဲ့မ​ပေးကွဘူးဘုရား..အမှနျ​က လမျး​မွေ​တှပေါ…သူတို့က ဝနျးထရံကာရငျး…လမျး​မွကေို ခြဲ့ခြဲ့ ပွီး ယူထားတာသံသရာမ​ကွောကျ​..ငရဲမ​ကွောကျ​နဲ့ဘုရား..တပညျ့​​တျော​တို့ ဖွူးမွို့ မှာ​နေ​တော့ အရှငျ​ဘုရား လဲ ကွားဘူးတယျ​မဟုတျ​လား..ဒကာမကွီးတဈ​​ယောကျ​​လေ…လမျး​မွယေူထားတယျ​
ရုတျ​တရကျ​သူကဆုံးသှား​တော့ ကြ နျ​တဲ့ရှာသူတဈ​​ယောကျ​ကိုမှီပွီး….လမျး​မွကေိုပွနျ​​ပေးကွပါ…ငါ့သားငါ့သမီး ​တှေ​ရေ..လမျး​မွကေိုပွနျ​​ပေးကွပါနဲ့ ​အျော​ပွီးထှကျ​သှားတယျ​​လေ…သူ့သားသမီး​တှကေ အမှူမဲ့အမှတျ​မဲ့​ပေါ့..ဆုတျ​မ​ပေးဘူး…ဒီအတိုငျးထားကွတယျ​..​နောကျ​ ၂ ရကျ​​လောကျ​ရှိ​တော့ ထပျ​ပွီးမှီပါ​လေ​ရော…မငျးတို့ငါ့စကားနားမ​ထောငျ​ဘူး…ငါ့စကားနားမ​ထောငျ​ဘူး​ပေါ့…သူ့သားသမီး​တှကေ. ဘာဖွဈ​​စခြေ ငျ​လို့လဲအ​မေ ဖွဈ​ခွငျ​တာကို​ပွောပါ…ဒီတဈ​ခါတကယျ​လုပျ​​ပေးပါမယျ​လို့ ဝနျ​ခံကွ​တော့လမျး​မွကေို တဈ​​ထောငျ​​လောကျ​ငါယူခဲ့တယျ​အခု..
အဲ့ဒီ ယူထားတဲ့…သဲမှူနျ့​အ​ရအေတှကျ​နဲ့အမြှ ငါ…ဒီ​မွကွေီးကို ​ခေါငျး​ပျေါမှာရှကျ​ထား​နရေတယျ​..စဉျးစားကွညျ့​ကွပါ….သဲမှုနျ့​အမြှ တဲ့…လကျ​တဈ​ဆုပျ​​တောငျ​မှပဲ..သဲပှငျ့​အ​ရအေတှကျ​…ကု​ဋကေုဋာ ခြီ ပွီးပါတာ…တဈ​​ပေ​လောကျ​ဆို…သံသရာတဈ​​လြှောကျ​လုံးခံ​ပအေုံး​တော့.. .​နောကျ​ပှငျ့​မယျ့​ အရိ​မေ​တ်တေ​ယြ မွတျ​စှာဘုရား​တောငျ​မှ ဖူးခှငျ့​မရ​တော့ဘူး..ဒီလိုခံရမယျ့​အ​ရေး​တှကေို မ​ကွောကျ​ကွဘူးဘုရား…သူ့အိမျ​ပါတယျ​..ငါ့အိမျ​ပါတယျ​နဲ့ ဆုတျ​မ​ပေးကွဘူး…​ဟော..အခု​တော့တဈ​ရှာလုံးသှားပွီဘုရား..ဟာ..ဦးသာသန…ဘာဖွဈ​လို့လဲ ဘုရား…ဘာဖွဈ​ရမှာလဲ ဦးကဝိနျ​​ရေ…ညက..တပညျ့​​တျော​ တို့ရှာ​လေး…မီး​လောငျ​တယျ​ဘုရား.. ….​လကေလဲ​နှေးဦး​ပေါကျ​ဆို​​တော့တိုကျ​တယျ​…ကိုယျ​​တျော​တို့ရှာက..မွို့ နဲ့နီးတာပဲ..မီးသတျ​ကား​တှမေ​ချေါဘူးလား…ဘယျ​မ​ချေါပဲ​နပေမလဲကိုယျ​​တျော​ရာ..​ချေါတာပ….မီးသတျ​ကားမှ လာလိုကျ​တာ..တပညျ့​​တျော​တို့မွို့ က မီးသတျ​ကားတငျ​မဟုတျ​ဘူး..အနီးအနားကမွို့ ​တှကေ မီးသတျ​ကားပါလာတာ…ဟ..ဒါဆို..​အေး​ဆေး​ပေါ့..မဟုတျ​ဘူးလား.ဟုတျ​ပ…ဟုတျ​ပ…​အေး​ဆေးခြ ကျ​..တဈ​အိမျ​မှမကနျြ​ဘူး…လှငျ​တီး​ခေါငျးထိုငျ​​နရေတယျ​…ဘာ​အေး​ဆေးသလားမ​မေးနဲ့..​ဟေ…မီးသတျ​ကားလဲမနိုငျ​ဘူးလား…ဘာမနိုငျ​ရမှာမှာလဲကိုယျ​​တျော​…ဆယျ​စီး​ကြျော​လာတယျ​…ဒါဆိုနိုငျ​ရမှာပါ..ကိုယျ​​တျော​တို့ရှာက အိမျ​​ခွေ၃၀၀ ပဲရှိတာကို…ဦးကဝိနျ​​ရေ.. .မီးသတျ​ကားဘယျ​နစီးလာလာရှာလမျး​တှကေိုခြဲ့ မ​ပေးကွ​တော့ တဈ​စီးမှဝငျ​လို့မရဘူးဘရား…..အခုအကုနျ​လုံးမီးထဲပါသှားပီ…​အေး​ရော..​အေး​ရောဘုရား…တဲ့..​ပွောလဲ​ပွော..ဖုနျးလဲခြ သှား​လရေဲ့..ဒီကဘာမှ​တောငျ​ပွနျ​မ​ပွောလိုကျ​ရဘူး…မှတျ​ထားကွ…မှတျ​ထားကွ​ဗြာ
အ​ရေးအ​ကွောငျး ဆို…မီးသတျ​ကားဝငျ​မရတဲ့အထိမဖွဈ​​စကွေနဲ့…​မွေ​လေးတဈ​​ပေ​လောကျ​နဲ့ ရှာအပကျြ​မခံကွနဲ့လမျး​တှကေို အ​ရေး​ပျေါအ​ခွေ​နမှောသုံးလို့ရ​အောငျ​…အနညျးဆုံး. မီးသတျ​ကားဝငျ​နိုငျ​ထှကျ​နိုငျ​​အောငျ​ ခြဲ့ ​ပေးထားကွပါ ခြဲ့ ​ပေး​အောငျ​အသိဉာဏျ​​ပေးကွပါလို့…ရှားလုံးကြှတျ​မီးထဲပါသှားတဲ့ ..ဦးသာသနတို့ရှာလေးရဲ့အဖွဈ​ဆိုးကို..နမူနာယူကွပါလို့..တိုကျ​တှနျးလိုကျ​ရပါတယျ​​ဗြာ။
တကျော့ပြန် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် စတင်ရိုက် ကူးကာ ၂၀၂၀ နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ရုံတင်ပြသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ရေချိုးလျှင် ခေါင်းကို ရေဦးစွာမလောင်းသင့်